देश दर्शन कार्यक्रमको सुरुवात, होला त पर्यटन पुनरूत्थान ? – Maitri News
देश दर्शन कार्यक्रमको सुरुवात, होला त पर्यटन पुनरूत्थान ?
काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण सङ्कटमा परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि छुट्टै कार्यदल गठन भएको छ । विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा राजधानीमा उक्त कार्यदल स्थापना भएको घोषणा गरिएको हो ।
Previous Previous post: कालापानी क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष प्याकेज ल्याइने
Next Next post: विद्यालयमा कोरोना फैलियो भने रोक्न कठिन